Kaniisadaha horay loo sii-diyaariyey
Nalalka Iftiinka Korantada
Caanaha Farshaxanka / Ubax
Sirta ku Saabsan Geedaha Ugu Wanaagsan
Waqtiga boostada: Aug-14-2020
Booqashada dhirta oo mararka qaarkood loogu yeero tubaakada ama xirmooyinka haramaha waxaa loo isticmaalaa in lagu gooyo ama loo gooyo dhir ama dhir udgoon. Waxaa jira kala duwanaansho kala duwan oo Booqday Furimaha Dagaalka geedo ku xiran hadba tirada gogosha ay ka kooban tahay ama sheyga ay ku samaysan tahay ama habka loo isticmaalo in lagu shiidiyo geedaha. Waa kuwan qaar ka mid ah secr ...Akhri wax dheeraad ah »
Waqtiga boostada: Aug-13-2020
WAA MAXAY GUDOOMIYAHA? Boorashku waa aalad loo sameeyay in lagu shiido geedaha iyo dhir udgoon googooyo yaryar. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu shikiyo xawaashka jikada, laakiin waxaa aad loogu isticmaalaa in lagu quuro burooyinkii marijuana qaybo yar oo cabirkoodu yar yahay. Boorashka caadiga ahi wuxuu ka kooban yahay laba qeybood oo loo kala saari karo oo ilkaha fiiqan ...Akhri wax dheeraad ah »
Tikniyoolajiyadda iftiinka dhirta ee LED-ga ayaa sharxaya aqoonta iyo adeegsiga fekerka
Waqtiga xaadirka ah, noocyada nalalka dhirta ee suuqa waxaa asal ahaan loo qaybin karaa seddex jiil: Iftiiminka qarniga ugu horreeya ee iftiinka warshadda LED wuxuu leeyahay isugeyn go'an oo casaan iyo buluug ah, oo leh nal iftiin joogto ah, iyo koronto DC. Jiilka labaad ee joogtada ah ee hadda ku shaqeeya nalka LED wuxuu leeyahay jiir go'an ...Akhri wax dheeraad ah »
Cinwaanka: 1816 Bldg G, Magaalada palirama, Hualian, Dist 27, Dalang Bao'an dist, Shenzhen, China
1816 Bldg G, Magaalada palirama, Hualian, Dist 27, Dalang Bao'an dist, Shenzhen, China
EM HEMGRINDER 2020 DHAMMAAN XUQUUQDA XUQUUQDAADA.
Talooyin - Alaabada kulul - Khariidadda Goobta